Oromiyaa iddoo adda addaatti namoonni hidhamaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Lalisee Mokonnon/Facebook
Naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti tibbana namoonni hidhamaa jiraachuu maatiin namoota hidhamanii BBC'tti himaniiru.
Intalli isaanii shamarree Lalisee Mokonnin kan jalaa hidhamte Obbo Mokonnin Dinqaa, "jiruu barbaacha beeksisa wayiitu bahe jennaan Naqamterraa baatee dhuftee, magaalaa Finfinnee naannoo Piyaasaatti qabamte" jedhu.
Erga hidhamtee guyyoota saddeet akka ta'eefi hanga ammaa mana murtiitti hin dhiyaatiin akka jirtuu dubbatu.
Intalli isaanii miseensa dhaaba siyaasaa kamiiyyuu akka hin taane kan dubbatan Obbo Mokonnin, Adda Bilisummaa Oromoo akka deeggartu shakkiin qaba jedhu.
Addi Bilisummaa Oromoo Sambata darbe ibsa baaseen mootummaan waliigaltee dhiyeenya kana mallattaa'e diiguun akka haaraatti miseensotaafi deggartoota isaa hidhaa akka jiru himeera.
Miseensa Gumii Shanee ABO kan ta'an Obbo Mikaa'el Booran BBC'tti akka himanitti "guyyoota muraasa darban keessa qofa Jalduu irraa namoota 18 ol, Ambo irraa namoota 22 ol, Mandii irraa Wiixata galgala qofa namooti 9, Naqamtee fi Buraayyuu irraas namootni hedduun hidhamaniiru."
Kanneen Ambotti hidhaman keessaa tokko miseensa gumii sabaa dhaabichaa akka ta'anis himaniiru.
Namoonni hidhaman kunneen "Yakka kana dalagan jedhamee himannaan seeraa irratti baname hin jiru, miseensotaa fi deeggartoota keenya waan ta'aniif hidhaman jennee shakkina" jedhu Obbo Mikaa'el.
Mootummaan garuu wanti kuni dhugaa akka hin taaneefi miseensa dhaabaa waan ta'ef namni hidhame akka hin jirre hima.
"Ji'a muraasa darban keessas ta'e sana dura miseensa ABO ykn deeggaraa ABO jedhamee namni Oromiyaa keessatti hidhame hin jiru" jedhan Direektarri Kominikeeshinii Komishinii Poolisii Oromiyaa Komaandar Hayiluu Fiqaaduu.
Namootni sababa birootiin shakkamanii hidhaman jiraachuu gaafatamanii ifatti deebii hin kennine.
"Dhaabni tokko isa tokkorratti hin dorgomu"
Komaandar Hayiluun sababa miseensotaa fi deeggartoota ABO ta'aniif namoonni hidhaman hin jiran haa jedhan malee maatiin namoota hidhamanii faallaa kanaa dubbatu.
Shamarree Lalisee Mokonnin deeggartu ABO'ti jedhamte akka hidhamte Abbaan Ishii Obbo Mokonnin BBC'tti himaniiru.
"Adda Billisummaa Oromoo waliin wal-qunnamtii qabdi isa jedhu jarumatu nutti hima, ijoollee keessan hin to'attani, iddoo ishiin ooltu hin beektani nuun jedhu" jedhan.
Rakkoo nageenyaa kutaalee biyyattii gara garaa keessatti mudachaa jiru furuuf qaamoleen nageenyaa mootummaa Federaalaa fi kan Naannoo sochiitti jiru.
Namoonni to'annaa jala oolaa jiran kunneen sochii rakkoo nageenyaa kana furuuf taasifamuun kan wal qabate ta'uu fi dhiisuu mootummaan ifatti hin dubbanne.
Addi Bilisummaa Oromoo waraana hidhatee socho'u hin qabu erga jedheen booda, namootni to'annaa jala oolaa jiran kanneen hidhattoota bosonatti hafan waliin hidhata qaban akka ta'an shakkama.
Komaandar Hayiluun garuu sababa kanaanis namni to'annoo jala oole buufata poolisiis ta'e manneen hidhaa Oromiyaa keessa jiraachuu ni waakkatu.
Namoonni sababa kanaan hidhaman manneen hidhaa magaalaa Finfinnee fi kan mootummaa Federaalaan bulan keessa jiraachuu wanti beekame hin jiru.
Mootummaafi ABO'n dhiheenya waligaltee taasisaniin ABO'n tarkaanfii nageenya kabachiisu mootummaan fudhatu akka deeggaruufi miseensonni dhaaba ABO hidhaa jiru jedhaman akka hiikaman waligaluun isaanii ni yaadatama.
'Oromoo ta'uun jijjiirama hin qabu, poolisiif gurraachi gurraachuma'
Waayit Hawus fuulduratti dabalatee mormiin US keessatti daran cimaa dhufeera
Weerara Covid-19 ofirraa qolachuuf qophiin Itoophiyaa hanga ammaa akkami?
Ejjannoo TPLF fi deebii Paartii Badhaadhinaa
Ruwaandaan magaalaa Kigaalii keessatti cilee fayyadamuu dhorkite
Itoophiyaan dhugummaa gabaasa Aminastii qorachaa akka jirtu beeksiste
Bu'aan qorannoo reeffa Joorj Filooyid eegamaa ture ifa ta'e
Qoricha dhibee Covid-19 fayyisu yoom argannaa?